Soo saar, qiime yar oo qiyaasta mitirka GPS-Geofumed
Oktoobar, 2012 GPS / Qalabka, topografia
Dhawaan waxa la soo bandhigay Shirkadda ESRI ee Spain, kaliya toddobaadkii hore iyo tan xigta waxay ku jiri doontaa TopCart ee Madrid.
Waa nidaam dejinta GPS iyo nidaam cabbir ah oo taageera kobcinta ka dib, taas oo lagu ogaan karo saxnaanta santimarka. Ma jiraan wax nidaamyo kale oo aan sameynin, laakiin waxa nagu soo jiitay fiirsigeena waa qiimaha.
Asal ahaan, qalabku wuxuu u shaqeeyaa sidii kaydiye. Waxay ku xiran tahay aaladda dibadda ah ee farshaxanka ah waxayna qaadaysaa qiyaasta qiyaasta fogaanta ee satelite ee faylasha ka dibna laga soo qaado USB-ga kombiyuutarka. Waxay taageertaa xogta laga helo dhibcooyinka, wadooyinka iyo garaannada, sababtoo ah waxa ay xisaabisaa meelaha.
Cabbirka iPod ah, aad u fudud, sidaa darteed waxaad qaadi karaan in jeebka ama xataa meeleeyey Velcro on furka la mid ah, taasoo si fudud u samayn kartaa cabir dhaqaaqo la Gacmihiinnu free.
Farqiga u, logger dhaqameed, sida baabuurta dabagal la isticmaalayo (sanduuqa madow) ah, waa in tallaabooyinka cayriin falaysaan postprocessing markaas duubay.
Sidoo kale, GPS-browser nooca nooca browser kaliya waxay qabataa jagooyinka, sax ah u dhexeeya mitirka 3 iyo 5 laakiin aan la hagaajin karin.
Xogta lagu soo daabacay kombiyuutarka waa feylasha ay ku jiraan cabir qoyan oo masaafo u ah satelite (wajiga pseudorange iyo marin-sidaha), marka laga reebo farriimaha caadiga ah ee NMEA. Xitaa iyadoon la shaqeynin ka dib, saxnaanta NMEA way ka fiican tahay nooca gawaarida nooca caadiga ah ee GPS, marka la eego in anteenada dibadda ay si weyn hoos u dhacdo qaylada qiyaasta.
Macluumaad noocee ah ayaa la heli karaa
Waxaa intaa sii dheer, Posify wuxuu bixiyaa adeeg ka dib adeegga, maadaama macaamiisha la soo diro oo la soo celiyo mar hore loo shaqeeyay qaab kala duwan iyada oo la tixraacayo xarumaha tixraaca GPS ee kuugu dhow.
Xeerarka la gaari karo waa:
20 si ay santimetrada 30 u qaadaan cabirrada
2 oo loo yaqaan 'SNUMX centimeters' loogu talagalay qiyaasta cakiran
Xaqiiqda tooska ah waxay ka timaadaa 2 ilaa 3 jeer saxda ah.
Xogta waxay ka timaadaa kml iyo qaabka shafefile. Intaa waxaa dheer, macluumaadka la xiriira postprocess, marka la eego qodobada kml, mid kasta wuxuu hayaa macluumaadka sida riyadiisa, dhererka qaababka darajooyinka / daqiiqo / daqiiqo iyo tobanlaha. Sidoo kale heerka sare ee ellipsoidal iyo orthometric, isku duwo UTM, tirada satelitayaasha la arki karo iyo qiyaasta saxda ah ee ka dambeeya postprocess.
Soo bandhig qiimaha 326 Euros, oo lagu daray canshuurta, guud ahaan udhow 395 Euros. Tan waxaa ka mid ah:
Soo-ogeysii kaydiyaha. Tani waxay keentaa kaarka micro SD ah ee 4 GB, kaas oo ku kaydin kara saacadaha 1,300 ee diiwaan galinta aan sal lahayn.
Batroolka lithium gudaha wuxuu taageersan yahay saacadaha 12 ee isticmaalka waxaana lagu dalacayaa saacadaha 4 ..
GPS wuxuu helaa xogta kudhaca L1 ilaa kanaalka 50, oo leh ikhtiyaar UBX / NMEA ikhtiyaari ah iyo qaab kasta oo labaad.
Antenna magnetic magnetic external Xaaladda mitirka mitirka 1.50, xidhiidhka SMA.
A saxanka saldhigga birta ee antenna, oo leh 10 cm. dhexroorka.
Mid ka mid ah cable USB / micro-micro
"Ciidan" oo ku xidhan velcro si uu u qaado anteeno iyo velcro dheeraad ah
Laguma daro fiilada USB, sababtoo ah waxaad isticmaali kartaa fiilo kasta oo aan hubinno in badan oo ka hartay qalab walba oo aan iibsanay.
Loo-shaqeeyaha ka dib, 99 Euros sanadkiiba ayaa la bixiyaa. Sannadka ugu horeeya waa bilaash, maadaama ay ku jirto iibsashada qalabka.
Taasi maaha Kale
Waa la fahmi karaa in qalabku yahay xog-qaade. Ma hayo shaashad si aad u tagto adigoo eegaya qalabka caadiga ah. In kasta oo ay ka fekereyso in hadda wax mobile ah oo isku dhafan GPS, fursadaha waa xiiso leh.
Tusaale ahaan waxaa loo isticmaali karaa in lagu wareejiyo macluumaadka waqtiga dhabta ah ee Smartphone.
Marka laga reebo faylasha qiyaasta qiyaasta ee ku dhexdhexaadka gudaha, Gaariga Posify wuxuu bixiyaa macluumaad dhab ah oo ku saabsan satalaytka iyada oo loo marayo dekedda USB. Macluumaadkan (xogta) waxaa ku jira cabbirka iyo cabbiraadda marxaladaha, iyo sidoo kale farriimaha NMEA ee ka yimaada xalka caadiga ah ee GPS. Macluumaadka USB (cabbiraadyada iyo farriimaha NMEA) waxaa lagu soo saarayaa isla hal cad oo ah diiwaangelinta faylasha (mar labaad). Xogta USB-ga ayaa si joogto ah loo soo saaraa iyada oo aan loo eegin in kaydiyuhu uu qorayo cashar cabbir ama haddii kale. Taasi waa, sida ugu dhakhsaha badan kaydka ayaa ku yaal, dekedda USB waxay soo saartaa had iyo jeer.
Tani waxay leedahay dhowr codsi oo suurtogal ah, oo isku xira gawaarida laptop ama mitirka mobile (PDA, smartphone):
Muujinta xaaladda Xayeysiinta GPS ee shaashadda (laga bilaabo fariimaha NMEA)
Qorista cabirada si joogto ah ee kombiyuutar (xarun tixraac)
Joogitaanka waqtiga dhabta ah (Real Time Kinematics ama RTK)
Jaantusku wuxuu muujinayaa bandhigga satellite-ka ah GPS-ga waqtiga dhabta ah ee casriga ah. Arjiga ayaa ku siinaya macluumaad ku saabsan tirada satellitka ee aragtida, yaraanta iyo kor u qaadista, iyo xoogga calaamadood. Waxaa sidoo kale xiiso leh in la eego DOP (Dilida of Precision), taas oo ah qiime muujinaya joomatari ee qalabka GPS: hooseeyo DOP si aad u fiican waa geometry ee satelite ah si loo saxo sax.
Halkee laga heli karaa?
Hadda oo kaliya ee Spain. Waxay ka shaqeysaa meel u dhow 180 xarumaha GPS ee ku baahsan qeyb weyn oo ka mid ah dhul-waynaha Spain. Shabakadda waxaa ka mid ah saldhigyada Machadka Qaranka ee National Geographic (IGN) iyo kuwa ka tirsan Jaaliyadaha Degmooyinka
Soo bandhigid si toos ah uga shaqeeya nidaamka rasmiga ah ee Isbaanishka ee ETRS89, qaabab badan oo kala duwan. In dhererka, qiimaha ellipsoidal (ellipsoid GRS80) iyo qiimaha celceliska heerka ama heerka badda (EGM08-REDNAP geoid)
Waxay ii muuqataa wax soo saar leh, taas oo aan u baahannahay inaan raacno sababtoo ah hubaal waxaan ka ogaan doonaa wax badan oo ku saabsan iyaga.
Post Previous«Previous Jaangoynta guryaha miyiga
Post Next GeoConverter wuxuu isku xiraa CONDORNext »
51 Jawaab in ay "Ogaysiis, qiimaha hoose ee xisaabta mitirka GPS"
Aquileo Cruz Paulino isagu wuxuu leeyahay:
WAXAAN LAHAYDAY MEXICO WAXAAN ILAAHAY XIDHIIDHA 2.0
hiwaayadda isagu wuxuu leeyahay:
Maxaa ku dhacay ogeysiinta? Weli ma suuqa? Websaydhka kor ku xusan waa dhismaha? Waxaan xiiseynayaa inaan iibsado labo qalab. Qofna ma yaqaanaa wax xiriir ah meesha iigu soo diri karo?
Michel isagu wuxuu leeyahay:
Salaan iyo wadatashi haddii aad haysato taariikhda iibka ee Mexico, ama waxaan jeclaan lahaa talo soo jeedin ah oo ah GPS-ga ee sahaminta cadawga ee diiqada
xakamaynta jimicsiga isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan haddii ay jirto cid macluumaadka meesha aad ka iibsan, 2 sano Waxaan raadineynay alaabta this iyo waxba heli, kaliya warbixin qoraal, ama ahaa troll ah ????
SEBASTIAN FORMON SEBASTIAN isagu wuxuu leeyahay:
Hello Javier Waan kuu mahadcelinayaa inaad i tilmaanto sida loo helo POSIFY sababtoo ah ma arko meeshii aan wax ka qaban lahaa waa GURIGA Waxaan iibsadaa hal isla markiiba iyo suurtagal ahaan labaad. Waad ku mahadsantahay horay
FORL DE LA PEÑA EDGE isagu wuxuu leeyahay:
Waxay noqon laheyd mid aad u xiiso badan in la helo tan (GPS) Hagaaji saxsanaanta, qiimaha barnaamijka barnaamijka habka boostada inta ay ku kacayso, marka laga reebo nidaamka boostada ayaa la bixiyaa 99 Euros, haddii aanan haysan shaqo bilaha 6. Aad qaali u ah.
Waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la helo 20 illaa 30 cmt. Kala-goys la’aan howsha boostada. Iibintu waa inay kujirtaa Lima Peru. Waad mahadsantahay
A la xiray Posify ?????? Waxba ma heli karo.
Juan Carlos Cubero isagu wuxuu leeyahay:
ee Central America gaar ahaan Costa Rica, waxaan rajeyneynaa inan halkan nagu caawino, wakiillada waxay doonayaan in ay ka qaadaan qalabka GPS.
Alexandra Ruiz isagu wuxuu leeyahay:
horeba waxaa laga helaa Colombia oo leh wakiillo?
Domingo Fernandez isagu wuxuu leeyahay:
Gacaliye Javier de Lázaro.
Waxaan xiiseynayaa inaan soo iibsado alaabtaas.
Waxaad iigu sheegi kartaa meesha iibka la sameyn karo.
Soo hel salaan salaan ah.
Marco Gomez Del Valle isagu wuxuu leeyahay:
Gacaliye Javier de Lázaro, waxaan rajeynayaa inaad u sii wadi karto Chile.
Waa arrin aad u xiiso leh in la isticmaalo si loo xaqiijiyo hantida macdanta iyo isticmaalka geology (sahaminta), sida adeegyo kale oo badan.
Waan ku faraxsanahay inaan tilmaamo sida aan u iibsan karo iyo goorta la heli doono Chile.
Marco Gomez Del Valle
Fadlan, waxaan rabaa macluumaadka Mexico,
Francisco Correa Nieto isagu wuxuu leeyahay:
Waa maxay horumarka laga gaaray taariikhda (Diisambar - 2015)
Leo isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan arkayaa in ku xirnaanta casriga ah ay ka shaqeyn karto RTK, sidaa daraadeed ma sameyn karnaa dareenka? Xaqiiqada dhabta ah ee kiiskan sidoo kale ma ka iman kartaa 20 illaa 30 cm?
Waqtigan xaadirka ah, intee in le'eg ayay tahay inaan ku sii jirno pto si aan u helno 2 3 cm?
Neptali Arteaga isagu wuxuu leeyahay:
Salaanti xiisaha - xiisaha lihi, waxaan ugu baahanahay shaqo ku saabsanaan bulsho. Sida aan ku jirno dhexda 2013. Aad ayaan ugu mahadnaqayaa in aan soo sheego waxa ilaa iyo hadda la gaarey, ee ku saabsan adeegsiga GPS Positive in Latin America. Haddii horay loogu iibsan karo Quito Ecuador Tusaale ahaan.
Waxaan u maleynayaa in gps fos ay aad u wanaagsan tahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa helitaanku ka jiro Kolombiya, ama goorta laga heli doono aaggan. Aad baad ugu mahadsantahay macluumaadkaaga.
joojiyaan iyaga isagu wuxuu leeyahay:
Muhiimad weyn ayey u leedahay shaqooyinka topography sababta oo ah cadaadiska ay hayaan marka ay diyaar noo yihiin.
jooji Boorarka bazalar
Waxaan ka shaqeeyaa faya-dhawrka: Ibarra, Imbabura, Ecuador.
Waxaan noqon lahaa wax aad u faa'iido leh aalad sida GPS aqoonsi.
Waan ku faraxsanaan doonaa inaan kuu sheego sida qalabka loo iibsan karo.
Neptal Arteaga C
Marcelo Conejeros isagu wuxuu leeyahay:
Miyay caymis ku leeyihiin Chile?
Javier de Lázaro isagu wuxuu leeyahay:
Xaqiijinta dhererka ayaa ka hooseeya. In Spain ee amarka xNUMX cm, laakiin waxaan ku dhicin inaan sheegno waxa uu noqon doono Peru.
Waxaan rajeynayaa in jawaabihii hore aanu ka jawaabnay su'aasha. Xiriirka. Marka laga hadlayo wadamada oo idil, runta waa in aan si taxadar leh u fiirsanno sababtoo ah waxay yihiin daraasiin caadooyin ah mana dooneyno in qalabka la joojiyo iyadoo loo marayo nidaam. Waxaan ka caawin doonaa Geofumadas caawimaad faahfaahin ah.
Xilligan la joogo waxaa laga helaa Spain. Laakiin, marka la eego tirada codsiyada ka yimaada Argentina ee Mexico, waxaanu shaqeynay toddobaadkan daraasaddan cusub ee 'Posify'. Soo sheeg 2.0 waxay dabooli doontaa dhamaan dhulkaas. Waxaad yeelan doontaa laba qaab oo kala duwan:
Kusoo xawil 2.0 keligaa: adoo adeegsanaya qalliinka isla markaana waxaad ku siin kartaa xalal qalad ah oo qiyaas hoose ah oo aan ku qiyaasno 50 cm. Waxaad lumin doontaa deg-degga sababtoo ah xalka aan la heli doonin illaa hal maalin kadib.
Kudar saldhigga 2.0 iyo keyger: Xaaladdan waxaad u baahan doontaa PC ku xiran Internetka kaas oo ku xirnaan doona keydka 2.0. Marka la calibrado oo la siiyo saldhiga tixraaca ee nidaamkayaga, Aqoonsi dheeraad ah ayaa loo isticmaali karaa si loo qaado cabbirada qaladka caadiga ah. Nidaamkan dhammaystiran waa qaali laakiin wuxuu u ogolyahay waxyaalla badan oo sarreeya.
Waxaan sidoo kale wax ka baraneynaa mashaariicda ad-hoc ee loogu talagalay in loo diro waddan kasta.
Waxaan ku qiyaaseynaa in labada habdhaqameed ay horay u heli doonaan 2013 iyo laga yaabo inay dhici karto bisha Janaayo.
Waxaan rajeyneynaa inaanu buuxin doonno dhammaan baahiyaha lagu sharraxay comments.
Waxaan rajeynayaa in aan ka jawaabnay faallo hore. Dib udabeeynta ayaa lagama maarmaan ah waana qaali laakiin isticmaalaha kama dambaysta ah wuu yaraan doonaa marka loo eego sida uu u shaqeeyo. Waxaan wali ku jirnaa sanado fudud oo ka yimaada soo saarayaasha kale marka la eego kharashyada.
Waxaan rajeynayaa in jawaabta hore ay ka soo jawaabtay xiisahaaga. Waxaan lahaan doonnaa astaanta hoose ee heerarka qaar ka mid ah qaaradda inkastoo ay tahay in la gaaro qodobbada aan ka heleyno Spain waxay noqon doontaa lagama maarmaan u ah qaabeynta dhameystiran.
Waxaan rajeynayaa in faallo hore aan ka jawaabnay su'aasha.
Faallo hore ayaa waxaan rajeynayaa inaan ka jawaabnay su'aasha.
Waxaa lagu iibsaday internetka. Ugudambeyn waa xiriiriyaha.
Kaliya waxaa laga helaa Spain
marcochiriboga isagu wuxuu leeyahay:
fadlan waxaan u baahanahay inaan ogaado halka laga gato iyo sidoo kale haddii ay iigu adeegto si aan u samaysto baqshiinka miyiga ah
Angel Teran isagu wuxuu leeyahay:
Sababtoo ah muhiimada kooxda, waxaan rabaa inaan sheego marka ay iibin doonto dalkayga, Venezuela?
Roland Hoffman Hernandez Rye isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan parese xiiso leh kooxda innobador this in uu noqon doono aad u faa'iido badan, sababta oo ah kharash yar oo ugu inportant waa centimetric, in waddanba anigaa sida Nicaragua waa in la qaybiyo, taas oo noqon doonta mid aad u faa'iido badan ee persdonas in aynu daraasad sameynayno farshaxanka iyo sidoo kale aad u faa'iido badan ee cadadaha degmada.
Waxay arrintu u muuqataa xiiso leh iyo waxay aaminsan yihiin in ee Mexico noocan ah qalab sidoo kale u waasiciyo taageero farsamo iyo ......... ..that haddii in Spain ay leeyihiin 100 MobileMapper ah kaas oo sidoo kale waxay leedahay postprocessing kharash dheeraad rumaysan Posify aad samayn hooskii muchisisisima marka hore qiimo miisaaniyadda iyo postprocessing waxaan idinku leeyahay, in Mexico haddii ay tani ka dhacay shirkado badan sida Ashtech u leeyihiin in ay wax ka qaban si ay u helaan ugu yaraan beerta ku siin code postprocessing iyo sidoo kale duurka software ah ... .saludos
Hal-abuurayaasha shirkadda 'Positive' waxay yiraahdeen hadda waxsoosaarka waxaa laga heli karaa oo keliya Spain. Laakiin inta ay la egtahay jawaabta Latin Amerika, sida xaqiiqada ah waxaad ka fakaraysaa wax weyn.
Judas Simon Tadeo Aquino Insfran isagu wuxuu leeyahay:
daacadnimo iyo daacadnimo aanan fahmin jawaabta
Waxyaabaha xiisaha leh waxay noqon doonaan in paraguay uu leeyahay jawiga loo isticmaalo waddankeena, haddii ay sidaas tahay, waxaa jira wareejin ah oo ku saabsan samaynta iibsiga adigoo interneetka ku jira.
Waxaan rajeynayaa in jawaabta la soo dhajiyo.
Iyada oo qiimahaas vrs. astaamahaas ayaa rajeynaya oo ugu dhakhsaha badan inay yeeshaan horumarin lama huraan ah waxaan ku dari karaa ra'yiga LA oo ah suuq suurtagal ah, samee sahan deg deg ah oo waad arki doontaa
jose suarez arvicio isagu wuxuu leeyahay:
Qalabkani waa mid aad muhiim u ah, waxay u tahay caawinaad weyn xagga topographers, in maalin kasta aan u baahanahay adeegsiga GPS ee sahaminta aagagga ay adag tahay in lala galo rugaha, waxaan kuugu mahadcelinayaa macluumaad dheeri ah, sida loo helo qalabka oo aan ka badnayn inaad ku darto saaxiib wanaagsan… salaan. arvicio J. Suarez. Venezuela
Roberto Ramirez Hernandez isagu wuxuu leeyahay:
galabtii hore, waxaan ku noolahay San Jose del Cabo, bcs
Waan xiiseynayaa inaan ogaado, waxaan rabaa inaan ogaado haddii ay ka shaqeyso aagahan
Waxaan xiiseynayaa in aan ogaado sicirka sicirka Mexican ama milkiilaha ee dollarka
Waxaan rajeynayaa inaan ka caawin karo salaantaas
Si daacadnimo leh, Roberto Ramirez
Javier de Lazaro Torres isagu wuxuu leeyahay:
Markaan ka jawaabno Kaysar ilaa maanta waxaan ka dhignay horumarinta lagama maarmaanka u ah Spain. Waxaanu qorsheeynaa inaanu ku fidino dalal kale sida Dominican Republic ama Bolivia.
Waxaan kari kari karnaa horumar horumarineed oo aanan ku tiirsanaan karin helitaanka saldhigyada. I soo dir email iimaan waxaan baran karnaa mashruuca haddii cabirada la qaban doono ay badan yihiin.
Qiimaha waxaa laga heli karaa boggayaga internetka
Waxaa ku jira VAT, kharashka maraakiibta ee Peninsula iyo sanadka koowaad ee waxqabadka internetka + taageerada
Aqoonsi ayaa hadda si gaar ah loogu qaybiyaa Spain.
Sannadka ugu horeeya ee hawlaha internetka ee tallaabooyinka waa bilaash. Laga soo bilaabo markaa waxaad sii wadi kartaa adigoo adeegsanaya adeegga internetka ee qiimaha 99 € sanadkiiba (canshuurta VAT).
Farsamada internetka waxaa ka mid ah taageero email. Taageerada taleefanka lama bixinayo.
Baakada waxaa lagu soo wareejinayaa baakada adeegga buluuga ah. Waqtiga gaarsiinta waa 3 maalmaha ganacsiga 5.
jorge lacruz isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa qiimaha GPS soo bandhigiisu yahay mahadsanid
Diego Rivera isagu wuxuu leeyahay:
Waxa xiiso leh soo jeedinta Posify, maxaa yeelay, in Colombia waxaa jira guryaha miyiga badan oo u baahan in yar oo cabbirka qaab dhismeedka more sax ah oo bixisa browser Garmin 2 mitir 3 iyo jir ahaan wax aan macquul aheyn in lagu cabiro leh saldhigga a total ama theodolite a . The Guild Sahmiyayaasha Colombia noqon lahaa aad ugu mahad celinayo haddii aad tirin on technology this ee dalkeenna.
ururka shaqaalaha farsamada iyo arq. isagu wuxuu leeyahay:
way iska cadahay inay sidoo kale tuuri karto utm string oo waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado hadii sidoo kale ay tahay dhakhso xaga cabirka
laakiin marwalba waxaan jeclaan lahaa in aan ku iibsado Peru sida Aria ama asta markii aan filayay qalabka i xiiseynaya
Soo saariddu waxay u muuqataa mid aad u wanaagsan marka ay noqon doonto qiyaastii colombia iyo in aad la shaqeyn kartid. mahadsanid macluumaadka
Waad ku mahadsantihiin Javier.
Ilaa xad ah in ay sameeyeen horumar in qorshayaashooda, waxaan avísenlo blog ama Twitter leeyihiin, sababtoo ah waxaan aaminsanahay in suuqa Latin American waa mid aad u soo jiidasho leh, laakiin waxay yeelan doonaan in ay arkaan qaababka kala duwan la Spain, sida helitaanka kooban saldhigyadii iyo isdhexgalka hay'ad yar.
Taasi waxay kuxirantahay wadanka aad jogtid iyo waxa aad uheshay. Latin America, isticmaalka Topcon iyo Sokkia si baaxad leh ayuu ugu faafay.
Waxaa jira qaar ka mid ah qalabka wax soo saarka ee Shiinaha ee soo socda, taas oo ka raqiisan laakiin ku dhaqanka waayo-aragnimadeyda aan arkay waxay ku qanacsan yihiin taageerada iyo tababarka.
Taladaydu waa inaan ka fekero xulashooyinka: Leica, Topcon, Sokkia, Geomax ama Spectra. Gaar ahaan kuwa aad looga isticmaalo wadankaaga maxaa yeelay way fududaan doontaa in la helo koorso, ama farsamo yaqaanno tababaran.
Iyada oo dookha aad leedahay waxaad tegi kartaa tartanka oo weydii inay ku siiyaan qalab u dhigma.
Haddii aad noo sheegto waddanka aad adigu tahay waxaan ku siin karnaa xiriirka lala yeesho wakiil kuu iman doona.
ilaa maanta waxaan ka dhignay horumarinta lagama maarmaanka u ah Spain. Waxaanu qorsheeynaa inaanu ku fidino dalal kale sida Dominican Republic ama Bolivia. Qalabka waxaa laga iibsan karaa bogga internetka ee Spain.
Iigu soo dir email, waxaanan ka baran karnaa Peru marka la eego dalalka kale.
Waxaan u baahanahay inaan iibsado saldhigga guud, oo aan ku taliyo, dhaqaale iyo wanaag
César Liborio Ortiz Espinoza isagu wuxuu leeyahay:
Waxa xiiso leh, kaliya waxa aan u baahanahay shaqooyinka waddooyinka wadooyinka iyo wadooyinka kale. In Peru shaqooyin badan oo sahaminta ah ayaa lagu sameeyaa si ballaaran oo waxaan u baahanahay noocyada qalabka noocan ah si aan u hagaajino adeegeena. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad naqo horey iyo waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo sida loo helo qalabka noocan ah ee waddankeena, gaar ahaan Lima-Peru.